Dagaal ka Bilowday Gobolka Shabeelaha Hoose
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeelaha hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Somalia iyo Kuwa AMISOM ay ka bilaabeen duulaan ku wajahan dhulka ay weli Maleeshiyada ururka Al-shabab kaga suganyihiin gobolka.
Ciidamadan huwanta ah iyo al-shabab ayaa lagu soo waramayaa inay ku dagaalameen muddo kooban beera aseendooyin ah, waxaana ilaa iyo inta la ogyahay dagaalkaasi ku dhintay hal qof oo rayid ah, afar kale oo laba ka mid ah ay yihiin ciidamada Amisomna wey ku dhaawacmeen.
Weli waxaa yar xogta laga helayo qasaaraha ka dhashay dagaalka iyo baaxadiisa.
Hase yeeshee saraakiisha dowladda ee gobolka ayaa sheegtay inay dilteen tira ka mid ah maleeshiyada al-shabab.
Ciidamada ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhowyihiin degmada Qoryooley iyo Golweyn.
Magaalada Barawe oo ku taala gobolka ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ee ururka Al-shabab, waxaana sanadihii la soo dhaafay weeraro ka geystay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Mareykanka iyo kuwa Faransiiska oo baadi doonayay muwaadin u dhashay, oo ay shabab heysatay, inkastoo ay markii dambe sheegtay inay dishay.
Dhinaca kale, wararka ka imaanaya gobolada Bakool iyo Gedo ayaa sheegaya in dadkii shacabka ahaa ee ka bara kacay degmooyinkii ay dhawaan la wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom, ay bilaabeen inay guryahooda ku soo noqdaan, waxaase laga soo sheegayaa xaaladdo bani aadnimo iyo gurmad ay dadkaasi u baahanyihiin.
Dhageyso Wareysi Dagaalka Shabeellaha Hoose